Raha mianatra amin'ny faharesena ianao dia tsy tena very. - Zig Ziglar - Pedia Quotes
Raha mianatra amin'ny faharesena ianao dia tsy tena very. - Zig Ziglar
Mamoaka ny traikefa isan-karazany ny fiainana. Tsy manao izany isika azavao tsara ny antony ao ambadiky ny tranga rehetra. Saingy tsy fantatsika fa ny rehetra amin'ireo traikefa ireo dia mandray anjara amin'ny fananganana ilay olona tena iainantsika. Ny traikefa sasany dia manome fifaliana, ny sasany manome alahelo antsika.
Amin'izany rehetra izany dia mihalehibe isika ary lasa mahazo vahana amin'ny fombany manokana ny fiainantsika. Mety hahatsapa ho tsy afa-manoatra isika mandritra ny fotoan-tsarotra, saingy tokony hihevitra azy ireo ho dingana sy miandry ny fotoana ho avy. Manome antsika hery hiatrehana izay mety ho noeritreretintsika tsy ho takatry ny saina ny famotsorana vola.
Betsaka ny zavatra tokony ianarana rehefa miatrika fotoan-tsarotra ny olona iray na very. Mampianatra antsika hahay handanjalanja izy io ary manome sary mazava tsara ny zavatra tena vitantsika. Takatsika fa ny fanaintainana dia mitrongy ary fantatsika ihany koa fa ny hany safidy dia ny mandresy.
Ireo fotoan-tsarotra ireo dia milaza amintsika hoe iza no tena namana. Manampy antsika hametraka fatorana maharitra mandritra ny fiainana izany. Voalaza fa mifankahazo tsara ireo namana efa niatrika ny toe-javatra ratsy satria nifanena tamin'ny tafio-drivotra izy ireo. Araka izany, misy lesona isan-karazany ianarantsika, ary mihoatra lavitra rehefa miatrika fotoan-tsarotra na faharesena aza isika.
Aza mieritreritra mihitsy hoe very ianao rehefa resy, satria nianatra ny lesona sarotra ny fomba hianaranao ary hitoetra eo aminao mandrakizay. Nahazo fahendrena sy fanananao ianao mandresy ny faharesena mampatanjaka anao noho ianao taloha.
Teny fohy fohy tsara indrindra
Mianara avy amin'ny teny fanadinoana
Teny nalaina avy amin'ny lesona
Teny nalaina momba ny fianarana avy amin'ny tsy fantatra
Teny fohy fanentanam-panahy
Fanatanjahantena fohy fohy
Fanentanana momba ny fanatanjahantena
Aza avela hipetraka amin'ny lohanao ny olona ratsy toetra sy toaka. Atsangano ny hofan-trano ary esory izy ireo. - Zig Ziglar
Raha mandeha amin'ny lalan'ny fiainantsika isika dia mifanerasera amin'ny olona marobe. Nihaona vaovao…
FEARANA: manana dikany roa: 'Adino ny zava-drehetra sy mihazakazaka' na ny 'Atreo ny zava-drehetra sy mitsangana.' Ny safidy dia anao. - Zig Ziglar
FEARANA: manana dikany roa: 'Adino ny zava-drehetra sy mihazakazaka' na ny 'Atreo ny zava-drehetra sy mitsangana.' Ny safidy dia anao. - ...
Mahaliana ny fiainana satria samy manana nofy sy filana maro anenjehana isika rehetra. Mamporisika antsika izany…
Ny fiainana 3 an'ny Fiainana: safidy, safidy, fanovana. Tsy maintsy misafidy ny manararaotra ianao na tsy hiova mihitsy ny fiainanao. - Zig Ziglar
Eny, miaina fiainana somary sahirana avokoa isika rehetra. Izahay dia manao ny zava-drehetra mba ahafahantsika…
Ny zavatra azonao amin'ny alàlan'ny fanatontosana ny tanjonao dia tsy manan-danja amin'ny tanjonao amin'ny alalanao amin'ny tanjonao. - Zig Ziglar
Eny, saika ny rehetra amintsika dia manana tanjona amin'ny fiainana. Ary mba hahatratrarana izany tanjona izany, manao ny rehetra isika…